आमा! हामीलाइ विचल्लीमा छोडेर गएपनी,तिमि त खुसी होैली है ? मन छुने एकपटक सबैले पढौ – पुरा पढ्नुहोस्……
आमा! हामीलाइ विचल्लीमा छोडेर गएपनी,तिमि त खुसी होैली है ? मन छुने एकपटक सबैले पढौ
राम्रो सँग पढनु है’ फोनमा भनेका यो आवाज बाहेक बुवाका बारेमा केही याद छैन रामेछापको रामपुरकी सन्जु तामाङलाई । सानैमा विदेश गएका बुवाको अनुहार पनि सम्झनामा छैन ।आकाशमा उडिरहेको हवाइजहाज आँखाले भ्याउन्जेल हेर्नुहुन्छ । साउदी गएका बुवा त्यही जहाजमा फर्केको कल्पना गर्नुहुन्छ । सन्जुले हवाइजहाज हेर्दै बुवा कुरेको ९ वर्ष भैसक्यो । मनमा बुवा नर्फकने थाहा भएपनि गाडी र हवाइजहाजको आवाज सुन्न साथ उहाँका कान ठाडा हुन्छन् । आँखाले तिनै आवाजलाई पछ्याउँछन् ।
बुवाका बारेमा कुरा गर्न थालेपछि सन्जु भक्कानिनु भयो । बुवासँग बोलेको सबै कुरा सुनाउन सक्नु भएन । नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका सन्जुका बुवाको घर फर्कनु भन्दा चार दिन अघि मृत्यु भयो । उहाँलाई बुवाको के कारणले मृत्यु भयो थाहा छैन् ।बुवाको शव नेपाल आए पनि सन्जुले देख्न पाउनु भएन । काठमाडौंमा दाहसंस्कार गरियो ।
बुवाको लास समेत देख्न नपाएकोमा सन्जुको गुनासो छ । चाडवाडका बेला सन्जुका आँखामा आँशु ओभाउँदैनन् । सन्जु भन्नुहुन्छ ‘कतैबाट बुवा आउँछन् कि जस्तो लाग्छ ।’सानै देखि आमासँग मात्र बसेका सन्जुका दिदीभाइका लागि आमा भन्दा अर्को संसार थिएन् । आमाले सबै चिज पु¥याएकी थिइन् । तर बुवा बितेको डेढ वर्षपछि आमाले पनि अर्कै सँग विहे गरिन् । त्यसपछि उनीहरु सहाराविहिन बने ।
बुवा बितेपछि उनीहरुका सबथोक बाजेबजै नै थिए । तर बाजे बजैले नै राम्रो व्यवहार नगरेपछि सन्जुलाई साह्रै दुःख लाग्थ्यो । ‘बजैले नराम्रो शब्दले गाली गर्ने, माइजूले पनि बाउ टोकुवा तिम्रै घर जाउ भनेर गाली गर्थे’ सन्जुले रुँदै सुनाउनु भयो । आफ्ना भन्नेले नै गरेका यस्ता व्यवहारले सन्जुलाई कोही नभए जस्तो लाग्थ्यो । सन्जुकी दिदी मन्जु भन्नुहुन्छ, ‘सबैले गाली गर्दा त कहाँ गएर मरुँ जस्तो लाग्ने ।’आमाले केही समय त तीनै जनालाई सँगै काठमाडौं ल्याएकी थिइन् । तर पछि मावलीमै लगेर छाडीदिइन । मावली मै बसेर सन्जु र मन्जुले एसइइ परीक्षा दिनुभयो ।
सन्जुको भने भविष्यमा आर्मी बन्ने लक्ष्य छ । तर यी सपना कसरी पूरा हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । बस्ने घरको ठेगान नभएका सन्जु र दिदी भाइलाई सुरुमा त यी सपना पूरा गर्ने घरको खाँचो छ । –डोननेपालबाट |
Prevबुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्, भन्ने प्रमाणित गर्दै पचास हजार मानिस भेला पारेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदै रवि-धिरज (भिडियोसहित)
Nextसागर आलेको चर्तित गित ‘खाईदेउ गोरी खाईदेउ गित को भिडियो सार्बजनिक( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को चौथो एपिसोडमा को-को छानिए ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आज कस्ले मार्ला बाजी? नेपाल आइडल-२ को ग्रान्ड फिनाले शुरु-हेर्नुहोस् (लाइभ भिडियो)
गृहमन्त्री थापालाई रवीको सिधाकुरा_ ‘ठेक्का प्रकृया केवल नाटक मात्र हो, झुर नाटक’ (पुरा हेर्नूहोस)